ပါးသီယာအင်ပါယာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပသီအင်ပါယာ (ဘီစီ ၂၄၇ -အေဒီ ၂၂၄ )ကို (အာဆာစစ်အင်ပါယာ) ဟုလည်း လူသိများပါသည်။ အီရန်နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပါဝါ ရှေးခေတ်အီရန်မှစတင်ခဲ့သည်။  အာဆာစက်  ထိုဦးဆောင်သူကို Parni ၏ဒေသအောငျနိုငျအတွက်အနွယ် သိပြည် အတွက် အီရန် တစ်ထို့နောက် 's အရှေ့မြောက်ဘက် satrapy အောက်မှာ (ပြည်နယ်) Andragoras ဟာဆန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုအတွက် လူးဆဒ်အင်ပါယာ ။ Mithridates ငါ (r ကို။ ဂ။ 171-132 ဘီစီ) ကိုအလွန်ရယူနေဖြင့်အင်ပါယာချဲ့ထွင် မီဒီယာ နှင့် ပိုတေးမီးယား ဆလူးဆဒ်ကနေ။ ၎င်း၏အမြင့်မှာ Parthian အင်ပါယာ၏မြောက်ပိုင်းနေရာကကနေဆန့် ဥဖရတ် သည်ယခုအခါအလယ်ပိုင်း-အရှေ့ပိုင်းကဘာလဲဆိုတာအတွက် တူရကီ, ကျြမှောကျခတျေမှ အာဖဂန်နစ္စတန် နှင့်အနောက်ပိုင်း ပါကစ္စတန် ။ အဆိုပါပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအဆိုပါအင်ပါယာ, ပိုးလမ်းမကြီး ဟာအကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ရောမအင်ပါယာ ထဲမှာ မြေထဲဝှမ်း နှင့် ဟန်မင်းဆက် ၏ တရုတ်, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စီးပွားကူးသန်း၏အလယ်ဗဟိုဖြစ်လာသည်။
၂ Parthian ရှငျဘုရငျ၏ Chronological ဇယား
Arsaces ငါ၏ ငွေ ဒရက်ခ်မာ ( r ။ ဂ။ 247-211 ဘီစီအီး) ဂရိဘာသာစကားကမ္ပည်း Ar "of Arsaces"
အဘယ်ကြောင့် အာဆာစစ်တရားရုံးမှ 247 ရွေးချယ်ခဲ့သည် ဘီစီဘီစီ Arsacid ခေတ်၏မနှစ်ကအဖြစ်အပျက်သည်မရေရာပါ။ ADH Bivar ဒီလူးဆဒ်မှသိပြည်များ၏ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရယခုနှစ်ခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချ Andragoras, ခန့်ထားသော satrap သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သူကို။ ထို့ကွောင့် Arsaces I သည် Parthia ကို Seleucid ထိန်းချုပ်မှုရပ်စဲသည့်အချိန်ကာလအထိသူ၏“ နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျကျန်ခဲ့ ” သည်။  သို့သော် Vesta Sarkhosh Curtis က Arsaces သည် Parni အနွယ်၏အကြီးအကဲအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သောနှစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။  Homa Katouzian  နှင့် Gene Ralph Garthwaite  ကတစ်နှစ် Arsaces သိပြည်သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်လူးဆဒ်အာဏာပိုင်များနှင်ထုတ်ခံရခဲ့သေး Curtis တောင်းဆို နှင့်မာရီယာ Brosius  Andragoras မခံခဲ့ရကြောင်းပြည်နယ် အတွက် Arsacids အားဖြင့်ဖြုတ်ချ 238 သည်အထိ ဘီစီ။
သိပြည်, အတွဲပြီး, အဝါရောင် shaded လူးဆဒ်အင်ပါယာ (အပြာ) နှင့် ရောမသမ္မတနိုင်ငံ 200 ဝန်းကျင် (ခရမ်းရောင်) ဘီစီ
ပသီလည်ရှည်တ​​ယော၊ ၃ ဘီစီ - အေဒီ ၃။
Parthian ရှငျဘုရငျ၏ Chronological ဇယားပြင်ဆင်
↑ Fattah၊ Hala Mundhir (2009)။ A Brief History of Iraq။ Infobase Publishing။ p. 46။ ISBN 978-0-8160-5767-2။ One characteristic of the Parthians that the kings themselves maintained was their nomadic urge. The kings built or occupied numerous cities as their capitals, the most important being Ctesiphon on the Tigris River, which they built from the ancient town of Opis.
↑ Brosius 2006, p. 125, "The Parthians and the peoples of the Parthian empire were polytheistic. Each ethnic group, each city, and each land or kingdom was able to adhere to its own gods, their respective cults and religious rituals. In Babylon the city-god Marduk continued to be the main deity alongside the goddesses Ishtar and Nanai, while Hatra's main god, the sun-god Shamash, was revered alongsideamultiplicity of other gods."
↑ Waters 1974.
↑ Brosius 2006
↑ Bivar 1983
↑ Curtis 2007
↑ Katouzian 2009
↑ Garthwaite 2005
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါးသီယာအင်ပါယာ&oldid=699728" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။